Meilleurs Bots Instagram Comparitif 2021 - Automatiser Instagram
Iibhothi ze-Instagram (IG bot) zisetyenziselwa ukwenza iakhawunti yakho isebenze, umzekelo, utshintshiselwano, izimvo, imiyalezo ngqo, ukulandelisa, ukurhoxiswa kokulandelwa kunye nabanye.
Injongo kukonyusa inani labalandeli bakho kunye nokwenza abalandeli bokwenyani, kwaye ayizizo ezothutho ezingezizo kunye neeakhawunti ezingezizo.
I-bots ye-Instagram inokukhawulezisa ulawulo lwemihla ngemihla lweakhawunti yakho kwaye yonyuse inani lotyelelo, abalandeli kunye nokucofa kwiwebhusayithi yakho.
La vidéo de 20 minutes ci-dessous explique en détail comment mettre en place un bot Instagram pour vous aider à développer vos comptes Instagram.
I-bots ye-Instagram inokuzenzekelayo imisebenzi emininzi – njengokuthumela imiyalezo kwi-Instagram feed ngokusekelwe kwiinjongo kunye nezikhokelo ozifaka kwi-Instagram bot.
Oku kuthetha ukuba uya konyusa ukubonakala kweakhawunti yakho kuba uya kuvela rhoqo kwi-Instagram feed.. Kanjalo, oku kuyakuvumela abantu ukuba bafumane umxholo wakho kunye negama lomsebenzisi, skrolela kwiakhawunti yakho kwaye, ukuba bayayithanda into abayibonayo, banokukulandela.
Khusela iAkhawunti yakho ye-Instagram
Iiakhawunti ze-Instagram ezinomxholo wokuzibandakanya kunye nokujolisa okufanelekileyo okuzenzekelayo kuya kuvelisa imisebenzi kunye nokunxibelelana okunokuthi kubonwe njengendalo kwaye kukhokelele kutyelelo lweeprofayili zokwenyani.. Oku kuyakuhlala phantsi kwe-radar yalo naluphi na uhlolo olwenziwe yi-Instagram..
Ngokuchaseneyo, Iakhawunti ye-Instagram enomxholo otyhafileyo kunye ongabalulekanga, ukujoliswa okuzenzekelayo okungalunganga kunye noqwalaselo, Nxibelelana nabantu abafumanisa ukuba lo msebenzi uyimbumba okanye ugaxekile.
Wonke umntu unamava akhe kwixa elidlulileyo, ukusuka kwii-MDs ezingasebenziyo ngokuzenzekelayo ukuya kubalandeli abangahleliyo kwii-niches ezahlukeneyo.
En 2017, I-Instagram icele ukuvalwa kweenkonzo ezininzi, ngakumbi i-Instagress, kodwa kukho ezinye iindlela.
Ii-bots eziphambili ze-Instagram
Sizizamile zonke kwaye iziphumo zibonisiwe ngezantsi:
Uvavanyo 24 heures pour 0,99 EUR
Ukuzenzekelayo Ukhetho lwesimbo sebali
Ukhuseleko oluhlanganisiweyo kunye iisetingi ezikhoyo zommeleli
Useto kunye nokucoca Isantya esiguqukayo siyafumaneka
Inflact (Ngaphambili u-Ingrammer)
2 semaines d’essai pour 32 EUR
Uhlobo oluzenzekelayo Njengo / Landela / Yeka ukulandela
Iimpawu ze ukhuseleko olusezantsi kunye nommeli
Izicwangciso zesantya esisiseko kunye ukhetho lokucoca ulwelo
3 jours Uzamo lasimahla
Ukuzenzekelayo Njengo / landela / awusalandeli / uphawule
Khetha ubuncinci bezokhuseleko kwaye akukho mmeli
3 réglages Isantya, Ukucoca okuqhubela phambili kunye nokunciphisa
3 jours d’essai pour 1 EUR
Ukhuseleko noncedo ngokuthi ummeli ofumanekayo
Uhlengahlengiso lwesantya kunye ukuhluza okukhoyo
Ukubonisana simahla kwaye 5 jours Uzamo lasimahla
a umlawuli we-akhawunti
Idilesi I-VPN / IP eyahlukileyo ukhuseleko
Useto lomsebenzi Isantya esizenzekelayo
Isicwangciso se Ukuqala simahla ngokusisigxina
Ukuzenzekelayo Njengo / phawula
Ukhuseleko oluphakathi kunye Ummeli owakhelweyo
Uhlengahlengiso olukhawulezayo eyahlukileyo esizisebenzelayo
Ukuzenzekelayo Ndiyathanda / ndiyalandela / andisalandeli / ndihlomle / ndibukele amabali / ndithumele kwakhona / i-DM
Ukhuseleko oluhlanganisiweyo kunye Iiproxiki ezinikezelweyo
Uhlengahlengiso olukhawulezayo iyafumaneka
5 jours Uzamo lasimahla
Useto kuphela Efanelekileyo ifumaneke
Ukuzenzekelayo Ndiyathanda / ndiyalandela / andisalandeli / ndibukele amabali
Ukhuseleko olusezantsi nge Ummeli owakhelweyo
3 réglages de vitesse ngezihluzi ezikrelekrele
Ukuzenzekelayo Ndiyathanda / ndiyalandela / andisalandeli
Hayi uhlengahlengiso olukhawulezayo
Yeyiphi inkqubo emayilandelwe ukukwazisa ngobukho babalandeli bobuxoki?
I-Instagram izama ukumisa i-bots isebenzisa iindlela ezimbalwa:
Isaziso “Dudula” ikwazisa ukuba basusa imiyalezo “inuthentique” eziye zachongwa zaveliswa sisicelo somntu wesithathu. Ulwazi lweakhawunti yakho luphawulwe njengolonakalisiweyo ngenxa yokuba wabelana ngalo nomntu wesithathu.
I-Instagram isasaza esi saziso ukukhuthaza abathengi ukuba batshintshe amaphasiwedi abo, yintoni ekuqhawula ngaphandle kwiqela lesithathu (I-bot Instagram)
Esinye isaziso sibonisa ukuba usebenzisa inkonzo “ikunceda ufumane abahlobo kunye nabalandeli” kwaye vimba iakhawunti yakho Ngexesha elinikiweyo.
Ngalo nto, oku kuhlala kungenxa yokuba usebenzisa inkonzo ye-automation ye-Instagram engakhuselekanga okanye ukuba wenze ukuthanda kwakho okanye izimvo zakho ngendlela engalindelekanga. Amagqabantshintshi e-bot athabathe i-Instagram kwaye athumela iflegi ebomvu kwi-Instagram – ke ulumke ungazenzisi iirobhothi ze-IG ngendlela engeyiyo.
Ukuba elinye lala manqaku mathathu angentla lenzeka, zama ukungakhathazeki. Kuyacetyiswa ukuba uyeke ukuzama ukunxibelelana ngeakhawunti yakho, Kwaye ungatshintsha i-Instagram bot, nokuba ucwangcise ukutshintshiselana kwakho ngesantya esincinci. Ibhloko iya kunyamalala ngaphakathi kwexesha eliboniswe kwisaziso (ngesiqhelo ngeveki) kwaye ungaqhubeka nokunxibelelana.
Instagram n’impose aucune action autre que l’envoi des 3 notifications ci-dessus.
Akuqhelekanga ukuba iakhawunti yakho igqekeziwe okanye yonakaliswe yi-IG bot, kuba ezi robhothi zikhona ngokukodwa ukunceda abathengi bazo. Ezi robhothi zixhomekeke kukhuseleko lwedatha kunye neakhawunti yakho.
Inye kuphela indlela yokuqinisekisa ukuba iakhawunti yakho ye-Instagram ifumana olona hlobo lokhuselo luphezulu., Oko kukusebenzisa igunya lamagqwetha kwiakhawunti yakho.
Ummeli utshintsha indawo apho i-bot idibanisa khona, ukwenzela ukuba ingenzi iintshukumo ezininzi kwindawo enye, Yintoni eza kuthanda ukuxelwa njengokuziphatha gwenxa.
Inkonzo oyithandayo esiyifumeneyo yile Inkqubo yeFrog. Le yinkonzo yommeli oshukumayo, Oko kuthetha ukuba unxibelelwano luyafana nolo lwe-smartphone, ke akabonakali ekrokrela kwi-Instagram.
Nxibelelana Iimpawu zeFrogProxy apha kwaye uqiniseke ukuba usebenzisa ezentlalo ezenzekelayo, ukhusela iakhawunti yakho ngommeli.
Ubuqhetseba: Njengoko usenokufumana ezi zaziso xa uzenzekelayo kwiakhawunti, Kuyacetyiswa ukuba uhlale ukhuselekile kwaye usebenzisa eyona bot ikhuselekileyo ikhoyo.
Zeziphi izinto ezisebenzayo kunye neempawu ze-bots ze-Instagram?
Silawula iiakhawunti ezahlukeneyo ze-Instagram – nous avons donc dû tester les 10 premiers pour voir quel bot Instagram fonctionne le mieux, yeyiphi eyona ikhuselekileyo!
Zeziphi ezona zibalaseleyo ze-Instagram bots?
Isizathu sokuba sikhethe i-IBF ngaphezulu kwezinye i-bots kungenxa yokuba sesibini esinexabiso eliphantsi kwintengiso kwaye azizizo zonke ezinye izixhobo ezikhoyo ezinikezela kuluhlu olubanzi lweempawu kweli nqanaba lamaxabiso..
Imisebenzi ezenzekelayo ngokukhawuleza: Ewe – kukho isantya somsebenzi ozenzekelayo, Oko kuthetha ukuba unokuseta isantya sakho. I-IBF ikwabonelela ngeshedyuli yomxholo omnandi, ukuzenzekelayo kwemiyalezo ethe ngqo kunye nohlalutyo, eyenza le Instagram bot lukhetho olufanelekileyo kuba inezinto ezininzi, ilayitile, Kulula ukuyisebenzisa kwaye ngaphezu kwayo yonke into efikelelekayo rhoqo ngenyanga.
VPN kunye noqwalaselo: Yenza eyakho iVPN usebenzisa le bot.
Ukhuseleko: Iinkqubo zokhuseleko ezihlanganisiweyo kunye nokukwazi ukusebenzisa eyakho i-proxy ephathekayo ngoxolo olupheleleyo lwengqondo. Icala elisezantsi kule nkonzo ye-automation ka-Instagram kukuba akukho nkonzo yabathengi., kodwa ayothusi le nto ngexabiso. Ukuba unamava okuzenzekelayo, ayizukuba yingxaki.
Iibhothi ezifanayo: Ukuba uyakuthanda ukusebenza komlandeli weBot ka-Instagram kodwa ufuna uncedo kwinkonzo yabathengi, emva koko uKapteni weNtlalontle unokuba lukhetho olufanelekileyo.
#2 – Inflact (ngaphambili Ingrammer)
Ixabiso: 49 EUR par mois
Isantya somsebenzi ozenzekelayo: Ewe – baneeparameter eziyimfuneko zokukukhusela. Zibonisa isantya esineenkcukacha zomsebenzi olingisa indlela yokuziphatha yokwenene yomntu, Iinkcukacha-manani nokucoca.
VPN kunye noqwalaselo: Ifakiwe xa kusenziwa iakhawunti.
Ukhuseleko: Iimpawu zokhuseleko ezisezantsi ozilindeleyo kwinkonzo yokuzenzekelayo.
Indawo yesibini: I-Boostgram sisixhobo esifanayo esikuvumela ukuba uphuhlise iakhawunti yakho ye-instagram, nangona ingasebenzi kakuhle njenge-Inflact.
Isantya somsebenzi ozenzekelayo: Useto olukhawulezayo oluzenzekelayo lulungile malunga noku – ngoseto oluqhelekileyo, ngekhe udlule kwimida ebekwe yi-Instagram.
VPN kunye noqwalaselo: Akukho cwangciso lwe-VPN okanye uncedo.
Ukhuseleko: I-Instazoods sele ikho ixesha elide kwaye ziyaziwa kwimarike ngenkonzo yazo ethembekileyo yabathengi.. Emveni kweminyaka, Bakwazile ukuziqhelanisa nohlaziyo lwe-Instagram kunye notshintsho, enokuba yinto elungileyo kuphela kubathengi. Uludinga ngokwenene olu hlobo lwamava kunye nolwazi ukuba ucinga ngokunyanisekileyo ngokukhulisa iiakhawunti zakho ze-Instagram..
Eli ayilo liva libalaseleyo okanye ujongano lomsebenzisi, kodwa inkonzo yabathengi igqibelele !
Iibhothi ezifanayo: IGramista ifana kakhulu ne-Instazood.
Isantya somsebenzi ozenzekelayo: Izinketho zesantya esiqhelekileyo.
VPN kunye noqwalaselo: Akukho zicwangciso zommeleli ezakhelweyo.
Ukhuseleko: Iphakheji esisiseko ikunika ukhuseleko oluqhelekileyo, kodwa akukho mmeli wendalo usilelayo kule bot. Unokuhlawula umphathi weakhawunti ukugcina i-automation yakho ngaphakathi kwemida.
Joli bot, Kulula ukuyisebenzisa ngeendlela ezintle zokujolisa.
Iibhothi ezifanayo: Ukukhahlela
#5 – ISensei yoLuntu
Ixabiso: 255 EUR par mois
Isantya somsebenzi ozenzekelayo: Kukho useto oluzenzekelayo lomsebenzi wesixhobo kunye nesi sixhobo kwaye balawula onke amanyathelo enkqubo ezenzekelayo yemidiya yoluntu kuwe. Oku kubandakanya uphononongo lokujonga esona santya sisebenzayo sinokuthi sikuthintele ekuxelweni..
VPN kunye noqwalaselo: Ufumana eyakho i-VPN kunye nedilesi ye-IP.
Ukhuseleko: Lindela ukufumana umphathi weakhawunti ozinikeleyo ukukunceda kwinqanaba ngalinye lendlela. Xa usungula iphulo, Uya kudinga uluhlu lwee-hashtag kunye neeakhawunti ofuna ukuseta njengeethagethi zokuzenzekelayo kwaye iqela labo liphatha konke okunye. Iziphumo zihlala zixhomekeke kumgangatho womxholo kunye noseto olisebenzisayo, Nangona kunjalo, nous avons vu 500 à 1000 nouveaux abonnés par mois avec Social Sensei.
Iibhothi ezifanayo: I-Upleap ibonelela ngomphathi weakhawunti ozinikeleyo ukukunceda ukhule abalandeli bakho.
#6 – Indibaniselwano
I-Instagram Bot: https://winchesclub.com/combin
Ixabiso: 18 EUR par mois
Isantya somsebenzi ozenzekelayo: Ukucwangciswa okukhawulezileyo okuzenzekelayo kulahla iqonga.
VPN kunye noqwalaselo: : Unokongeza ummeli wakho usebenzisa isixhobo esakhelwe-ngaphakathi.
Ukhuseleko: Iqonga elikhuselekileyo nelingaguquguqukiyo – unokukhetha ngesandla iiakhawunti ofuna ukuzilanda kwangaphambili, Emva koko ukudibanisa kuya kwenza izicelo nge-Instagram, kukunika ulawulo olupheleleyo.
Iibhothi ezifanayo: Le bot ihluke ngokupheleleyo ekusebenzeni kwayo – akukho enye isebenzisa ukhetho lwencwadana yezenzo ezithile.
#7 – NgxiBoss
Isantya somsebenzi ozenzekelayo: Izixhobo ezikwimo yobukrelekrele bokuzenzela zisetyenziselwa ukunciphisa imisebenzi yakho ngaphambi kokuba i-Instagram ibhloke iakhawunti yakho. Iphinda izivelise ngokuzenzekelayo emva koko.
VPN kunye noqwalaselo: Isoftware ikuvumela ukuba uqwalasele ummeleli, kwaye kuxhomekeke kuhlobo lwesibonelelo, vous pouvez obtenir jusqu’à 10 proxys.
Ukhuseleko: Ils prétendent être 100% sécurisés car chacune de leurs offres comprend des proxys dédiés. Yintoni egqithisile, idatha yakho ibhalwe ngokufihlakeleyo kwaye uyaxhamla kwinkxaso yeprimiyamu, ekhawulezayo kakhulu.
Iibhothi ezifanayo: UJeffrey
I-Instagram Bot: https://winchesclub.com/jarvee
Ixabiso: 29.95 EUR par mois
Isantya somsebenzi ozenzekelayo: Akukho kukhankanywa kokumiselwa kwesantya kwimisebenzi ezenzekelayo.
VPN kunye noqwalaselo: Lindela iakhawunti nganye ye-Instagram ukuba isebenze kunye nommeleli wayo we-HTTP.
Ukhuseleko: Le bot yenzelwe ukulinganisa imisebenzi yezentlalo yemihla ngemihla kwi-Instagram ukuya kumaxesha alishumi ngokukhawuleza kunokuba umntu ophakathi anokuzigqiba ngokwahlukeneyo. I-bot ingaba yingozi, étant donné qu’il fonctionne en continu pendant 24 heures chaque jour, kwaye abasebenzisi baba semngciphekweni wokugqitha ngokuphindaphindiweyo kwimida yokuzibandakanya kwi-Instagram.
Iibhothi ezifanayo: Ukukhula
#9 – Instavast
I-Instagram Bot: https://winchesclub.com/instavast
Isantya somsebenzi ozenzekelayo:I-Instavast ikuvumela ukuba uhlengahlengise isantya sokuzenzekelayo. Eli nqaku linokuba luncedo ukuba ufuna ukunciphisa umngcipheko wokuba i-Instagram ikubone.. Vous avez le choix entre 3 vitesses en commençant par lente, eqhelekileyo kwaye ngokukhawuleza. Ukucwangciswa okucetyiswayo kwesantya somsebenzi wakho kufanele ukuba “Ukuzila” xa uqala ukusebenzisa iinkonzo zabo.
VPN kunye noqwalaselo: :
Iiapps zommeli eziyilelwe ngaphakathi zinokukhutshelwa kwaye zifakwe kwiselfowuni okanye kwiPC.
Ukhuseleko:Iimpawu zokhuseleko ezisezantsi, Nangona kunjalo, babanga ukuba inkonzo yabo yokukhula ihambelana ngokupheleleyo nemigaqo yenkonzo ye-Instagram.
Iibhothi ezifanayo: INitreo
#10 – I-Ektora
I-Instagram Bot: https://winchesclub.com/ektora
Ixabiso: 95 EUR par mois
Isantya somsebenzi ozenzekelayo: Zinezicwangciso ezifunekayo zokukhusela iakhawunti yakho nakwiwebhusayithi yazo ithi loo bot iyahambelana nemigaqo yenkonzo ye-Instagram.
VPN kunye noqwalaselo: Inika ukuthengwa simahla kommeleli kunye nokuseta. Inkqubo yabo ikhathalela ukumiliselwa kwakho yokhuseleko..
Ukhuseleko: Ngokwezokhuseleko, I-Ektora ibonelela ngesisombululo esahlukileyo kunye nesintsha sokuqinisekisa ukuba abasebenzisi baso ababonwa njengogaxekile okanye abavinjelwe. Yonke imisebenzi ye-automation isekwe kwi-AI kwaye iqonga lisebenzisa ukubonwa kobuso kwaye likhupha uhlobo lwamva nje lwe-Instagram mobile app. Inkonzo yabo yokukhula isekwe ekuziphatheni komntu ngokwento ye-Instagram, Le yindlela abalawula ngayo ukuphuhlisa abaphulaphuli abazele ngabasebenzisi bokwenyani.
Iibhothi ezifanayo: Ukukhula kwesilo
Q. YINTONI EYONA BEST INSTAGRAM BOT YOKUGQIBELA
A. Kuzo zonke i-bots esizifumeneyo, sincoma i-Instagram Follower Bot kuba isebenza ngokukhawuleza okukhulu, ngakumbi kwi-hyper pro voti.
Q. NDINGAYIKHUSELA NJANI I-AKHAWUNTI YAM
A. Ungayikhusela iakhawunti yakho ngokusebenzisa inkonzo yommeleli. Ngele ndlela, Idilesi yakho ye-IP iya kutshintsha ngokuzenzekelayo.
Q. ZINTONI Iibhola ze-IG ezinokukhuseleka okuhle
A. I-IBF kunye ne-Ingramer zezona zibalaseleyo ze-instagram zokhuseleko. Ungayikhusela iakhawunti yakho ngokusebenzisa inkonzo yommeleli.
Q. I-AKHAWUNTI YAM IZAKUVALWA
A. Konke kuxhomekeke kwindlela oyiphatha ngayo iakhawunti yakho kwaye ukuba usebenzisa ummeli..
Q. ZIKHONA IIBOTI KWI-INSTAGRAM?
A. Uninzi lwe-bots ze-Instagram ziyafana ngokuzenzekelayo kwaye ziyalandela, kuxhomekeke kwibhothi nganye.
Q. Ngaba IINSTAGRAM BOTS ZOMTHETHO?
A. Iinkampani zeendaba zosasazo zinokuthi zibhange kwezinye i-bots, kuxhomekeke kwinto nganye eyenzayo. Nangona bengekho mthethweni.
Q. NGABA KUKHO IINSTAGRAM BOTS ESEBENZA?
A. Uninzi lweebhot zineziphumo ezilungileyo, ngakumbi i-IBF kunye ne-Ingramer.
Q. LES INSTAGRAM BOTS FONCTIONNE-ILS TOUJOURS EN 2020?
A. Ezinye i-bots ziyekile ukusebenza, kwaye eminye imisebenzi isenokungasebenzi. Nangona kunjalo, uninzi lweebhothi ezikuluhlu olungentla zisebenza ngokugqibeleleyo.
Q. INGABA IINSTAGRAM BOTS ZIYALUSEBENZA??
A. Ewe, Unokufumana abalandeli bokwenyani ngokukhawuleza kuxhomekeke kwi-niche yakho.
Article précédentComment ajouter une story sur Instagram
Article suivantLes Meilleurs Bots TikTok sur le Marché et Comment Protéger Votre Compte